Oke mmiri ozuzo Spain: Omume dị egwu nke ndị nkịtị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Oke mmiri ozuzo Spain: Omume dị egwu nke ndị nkịtị
News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Spain snowstorm - foto site n'aka Antonio Ventura
Spain na-ata ahụhụ oke oke mmiri ozuzo site na aha Filomena, na-eweta oke ikuku na-agbasa agbasa na ugwu nke snow. Thebọchị kachasị njọ ka ga-abịa ikwu ndị na-ahụ maka mbara igwe. N'ime ya niile, ọ bụ mbọ ndị nkịtị na-ebute mba a n'oge ọdachi a.
Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, na Aragón na-anọgide na njikere ọbara ọbara maka obere okpomọkụ na-emetụta ógbè 41 dị na mba ahụ dịka oke mmiri ozuzo Spain nke aha ya bụ Filomena bịara ịnọ ụbọchị ole na ole. Edere ọnọdụ okpomọkụ kachasị ala na -25.4 C na obodo Turolian nke Bello.
Ndị ọrụ ahụike na Madrid agaala oke ogologo - ụfọdụ na-eje ije ọtụtụ awa - iji nyere ndị ọrụ ibe ha ike gwụchara ihe a oke mmiri mmiri ozuzo hapụrụ Spain na ọdachi abụọ nke oke egwu na oria ojoo coronavirus. Ọrịa ọhụrụ na Spain n’ime awa 24 gara aga bụ ọnụọgụgụ nke 6,162.
Oké ifufe Filomena kụrụ Spain na Fraịdee, Jenụwarị 8 na-eme ka ndụ dị na Madrid kwụrụ ebe obodo ahụ nwetara oke mmiri ozuzo ya kachasị njọ n'ime afọ 50 ma hapụ ọtụtụ puku mmadụ tọrọ n'ụgbọ ala ha, ụfọdụ ruo ogologo oge 12 na-enweghị nri na mmiri.
N'ụlọ ọgwụ ndị dị na Madrid, ndị agbatịworo site na coronavirus caseload nke dị n'etiti ndị kachasị elu na mpaghara, ndị ọrụ ike gwụrụ kpara iji nagide. Ndị ọrụ ahụike gbatịrị okpukpu abụọ ma gbanwee okpukpu atọ maka ndị ọrụ ibe ha enweghị ike ịbanye, ebe otu ụlọ ọgwụ tụgharịrị mgbatị ya ka ọ bụrụ ebe obibi maka oge maka ndị ọrụ na-enweghị ike ịla.
Ebe e gbochiri ụzọ ụgbọ oloko ma mechie ụgbọ oloko, onye enyemaka nọọsụ Raúl Alcojor jere ije kilomita iri na anọ iji mee ka ọ gbanwee n'otu ụlọ ọgwụ dị na mpụga obodo ahụ. Ọ sịrị: “Omume enweghị ike ịnọ n’ụlọ,” ka ọ na-ekwu maka ndị ọrụ ibe ha nọ na-arụ ọrụ ihe karịrị awa 14.
Njem ahụ were ya awa abụọ na nkeji iri abụọ na asatọ, gbagwojuru anya site na ọtụtụ osisi ndị dara ada na snow nke ụfọdụ na-adị omimi 2 centimeters. "Agwara m onwe m, 'gaa maka ya,'" Alcojor gwara onye mgbasa ozi Cadena Ser. “Ọ bụrụ na m rute ebe ahụ, ana m anọ ya. Ọ bụrụ na emeghị m, m ga-atụgharị. ”
Akụkọ ọzọ nke otu onye ahụike gara njem nke gbara kilomita iri na asaa iji rute ọrụ - njem ọ kọwara dị ka "nnukwu snow," kpaliri otuto sitere na Mịnịsta Ahụike nke mba ahụ na Sọnde. "Nkwenye ndị ọrụ ahụike na-egosi bụ ihe atụ nke ịdị n'otu na nraranye," tweeted Salvador Illa.
Ndị ọzọ nwere otu echiche. Otu nọọsụ nyere akụkọ ya ka ọ na-eme njem njem 20-kilomita gaa ụlọ ọgwụ ya na ụkwụ mgbe vidiyo nke e tinyere na mgbasa ozi mgbasa ozi gosipụtara ndị nọọsụ 2 na-eje ije kilomita 22 iji rute ụlọ ọgwụ Madrid nke 12 de Octubre.
Ellos Enfermeros Paco & Mónica, 22km caminando bajo la nieve para llegar al relevo en la # UCI del Hospital 12 de Octubre !!! Sois únicos. Gracias a todos los #sanitarios kedu ihe ọ pụtara. # onyinye12 #onyinyevos #iheanacho #NevadaEnMadrid #ụlọ ọgwụ pic.twitter.com/8HHVQhV7pN
- Dely (@maraquinta) January 9, 2021
Ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-ebu amụma na ụbọchị kacha njọ ka ga-abịa, na-abata taa. Nnukwu ifriizi a ga-edebe nnukwu snow nke a wụsara n’ala ruo ọtụtụ ụbọchị.
Na Sọnde, mba ahụ ji nwayọọ nwayọọ si n'oké mmiri ozuzo ahụ pụọ, ndị ọrụ afọ ofufo na-eji ihe niile site na frying pans ruo brooms iji kpochapụ n'okporo ámá na ụzọ mbata ụlọ ọgwụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo onwe ha na-agwụ ike nyere obodo niile aka. Ndị nwere ụgbọ ala ụkwụ anọ na SUV - naanị ụgbọ ala nwere ike ịgafe snow na ice - na-akpọta ndị ọrụ ahụike n'ụlọ ọgwụ ma na-enyere aka ebe ụgbọ njem chọrọ ngwa ngwa.
Marklọ ahịa na-enwukwa ihe nkiri nke Machị n'ihi COVID, na shelf na-anọdụ efu ka ndị mmadụ na-echekwa ngwongwo na akwụkwọ mposi. Echere ka echekwa ụlọ ahịa ọzọ n’oge adịghị anya.
Ihe dị ka ndị ọrụ 90 na ndị na-azụ ahịa nọgidere na-atọ ụtọ na etiti ụlọ ahịa na nso Madrid ma manye ha ịnọ ụbọchị abụọ gara aga ebe ahụ mgbe oke mmiri ozuzo liri ụgbọ ala ha ma gbochie nhọrọ nnweta.
Onye isi obodo Madrid, Fernando Grande-Marlaska, gbara ndị mmadụ ume ịhapụ okporo ụzọ. "Oké ifufe ahụ na-eweta oke mmiri oyi nke nwere ike ịkwali ọnọdụ okpomọkụ ka ọ dekọba ọkwa."
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na ụnyaahụ ga-arụ ọrụ. METRO bụ naanị ụgbọ njem na-arụ ọrụ ma jupụta ya oke. Nke a abụghị ọnọdụ dị mma ịnọ n'oge ndị a nke oria COVID.
Na mgbakwunye na ihe egwu dị na ọnọdụ okpomọkụ a, ndị Spain adịghị njikere maka ụdị ntu oyi abalị dị otú ahụ na oke oyi ehihie. Ọtụtụ ụlọ enweghị kpo oku nke nwere ike iguzogide ọkwa oyi a.
Halllọ nzukọ obodo ekwupụtala nnukwu mbibi nke ọrụ ugbo, mmebi nke osisi dara na ụgbọ ala ọha na nke onwe, yana ọtụtụ ndị nwe ụlọ n'ime ime obodo ndị na-eme ọkpọkọ na elu ụlọ. Ọtụtụ puku gwongworo ka tọrọ atọ n'okporo ụzọ na n'ebe a na-eje ozi.
Otu onye uwe ojii mgbe ọ na-ala n'ụlọ ya tọrọ atọ na ihe karịrị ndị ọkwọ ụgbọala 200 n'ehihie Fraịde na ọwara M-30 n'akụkụ Valencia. Ya na onye ọrụ okporo ụzọ M-30 rụrụ ụka onye na-akpọ na redio ka ọ kpọpụ ụgbọala niile si na ọwara ahụ. Onye uwe ojii ahụ rụrụ ụka na ọwara ahụ bụ ebe kachasị nchebe maka ụgbọ ala na oke ikuku mmiri. Ka ọ na-anwa ime ka ndị isi n'okporo ụzọ ahụ kwenye, otu dọkịta na-ahụ maka ụgbọ ala bịakwutere ya na-akwado arụmụka ya na a ga-echekwa ụgbọala ndị a nke ọma n'ime ọwara ahụ n'oge oke oke mmiri ahụ. N’ikpeazụ, o jisiri ike chebe ụgbọala ndị ahụ n’ime ọwara ahụ.
Ma onye isi ọrụ ahụ ma ndị isi okporo ụzọ gwara ndị isi ha banyere ọnọdụ mberede ahụ ma hazie ọrụ nlekọta maka ndị niile nọ n'ụgbọ ala yana dọkịta na nọọsụ. Dị ka ihe ka ọtụtụ n'ụgbọ ala ahụ nwere injin ha, ọ dị mkpa iji sistemụ ventilashion rụọ ọrụ kwa nkeji ise ọ bụla iji zere nnukwu nsogbu nke carbon monoxide na-ewu. Ndị ọkụ ọkụ butere mmiri na akwa mkpuchi na akwa akwa.
Mgbe chi bọrọ n’ụtụtụ echi ya, onye uwe ojii ahụ nwere akpụkpọ ụkwụ na uwe ugwu n’elu ogwe ya, were ụzọ ọpụpụ mberede wee jee ụkwụ gaa ụlọ ahịa ahịa Alcampo de Moratalaz. Olileanya ya bụ ịchọta onye ahịa nwere ike inye nri na ihe ọ drinksụ drinksụ maka ndị nọrọla n'ụgbọala ha n'ime ọwara nke snow ahụ tụrụ mkpọrọ, ndị mgbasa ozi Spanish kwuru.
Ọ bụ ọrụ pụrụ iche nke ndị nkịtị na-adọta ụmụ mmadụ site na nsogbu.